သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပွဲတတ်ဝတ်စုံကို ရှာဖွေဖို့ အကြံပြုချက် ၈ခု
Home Fashion သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပွဲတတ်ဝတ်စုံကို ရှာဖွေဖို့ အကြံပြုချက် ၈ခု
အမျိုးသမီးတိုင်းက ပွဲအခမ်းအနားတွေ တတ်ဖို့ ကြုံလာတဲ့အခါ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုအတွက် ဖွင့်ထားတဲ့ဗီဒိုရှေ့မှာ အချိန်များစွာ ကုန်ရပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်ခန္ဓာအချိုးအစားနှင့် ၀တ်စုံလိုက်ဖက်ခြင်းကလည်း အရေးပါပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားတွေက ဘယ်လို ၀တ်စုံလေးတွေ ၀တ်ဆင်သင့်သလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သင့်မျက်နှာပုံစံနှင့် အများဆုံး လိုက်ဖက်မယ့် ဆံပင်ပုံစံများ
ပန်းသီးပုံ ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်က အပေါ်ပိုင်းပြည့်ပြည့် ရှိပါတယ်(သင့်ရဲ့ ရင်ဘက်က တင်ပါးနဲ့ခါးထက် ပိုကြီးပါတယ်)။ ဒရူးဘယရီမိုး၊ အိန်ဂျလီနာဂျီလီနှင့် Tyra Banks အပါအ၀င် နာမည်ကြီး တချို့က ပန်းသီးပုံ ကိုယ်ခန္ဓာရှိပါတယ်။ ပါတီပွဲတစ်ခုမှာ လူတိုင်းက သင့်ကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဖြစ်စေချင်လျှင် သင့်ခါးကိုသေးသွယ်စေမယ့် ဂါဝန်ရှည်လေးတွေကို ဆင်မြန်းပါ။
သင့်ပုခုံးတွေဟာ သင့်ခါးလိုင်းနှင့်တင်ပါးထက် ပိုကျယ်လျှင် သင့်မှာ တြိဂံပြောင်းပြန်ပုံသဏ္ဍာန် ရှိပါတယ်။ Renee Zellweger၊ Demi Mooreနှင့် Naomi Campbell အပါအ၀င် မင်းသမီး၊ မော်ဒယ်အတော်များများမှာ ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပုံစံရှိပါတယ်။ ဗီပုံစံလည်ပင်းပေါက်၊ ပခုံးပျောက်ပုံစံ၊ ပခုံးတစ်ဖက်ပျောက် ဂါဝန်လိုပုံစံမျိုး ၀တ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
သဲနာရီပုံသဏ္ဍာန်ဟာ ခါးသေးပြီး တင်နှင့် ရင်အချိုးအစားကျပြီး အလှဆုံးပုံစံတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Marilyn Monroe၊ Blake Lively၊ Scarlett Johansson နှင့် Dita von Teese တို့လို ကျော်ကြားတဲ့ မင်းသမီးတွေမှာ သဲနာရီပုံကိုယ်ခန္ဓာရှိပါတယ်။ ဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံစံက ဘယ်အရာမဆို ၀တ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးပုံသဏ္ဍာန်က တင်နဲ့ရင်ပုံသဏ္ဍာန်မရှိခြင်းနှင့်အတူ အရပ်ရှည်ပြီး ပိန်တဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ Jennifer Garner နှင့် Anne Hathaway တို့လိုနာမည်ကြီးတွေမှာ ငှက်ပျောသီးပုံခန္ဓာကိုယ်ရှိပါတယ်။ သူတို့သည် ဘယ်ဂါဝန်အမျိုးအစားမဆို ၀တ်ဆင်နိုင်ပေမယ့် A-Line dress၊ Pencil စကတ်/ဂါဝန် ကဲ့သို့သော ၀တ်စုံတွေကိုတော့ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
၅။ သစ်တော်သီး ပုံသဏ္ဍာန်
သင့်တင်ပါးတွေက သင့်ခါးနှင့် ရင်ထက် နည်းနည်းပြည့်နေလျှင် သစ်တော်သီးပုံသဏ္ဍာန် ခန္ဓာကိုယ်ရှိပါတယ်။ Kim Kardashian, Shakira နှင့် Jennifer Lopez အပါအ၀င် နာမည်ကြီး အများစုမှာ ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရှိပါတယ်။
ပုံခုံးပေါ်မှာ အတွန့်လေးတွေနဲ့ ဂါဝန်
A-Lin (သို့) ညာဘက်ပုံမှာပြထားတဲ့ tulip စကတ်ဝတ်စုံလို ၀တ်စုံမျိုး ဆင်မြန်းပါ။
၆။ ထောင့်မှန်စတုဂံ ပုံသဏ္ဍာန်
ဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်က ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ပစောက်ပုံလည်ပင်းပေါက်၊ အသည်းပုံလည်ပင်းပေါက်၊ ဘေးခွဲ Pencil စကတ်၊ တို့ကို ၀တ်ဆင်ရင် လိုက်ဖက်ပါတယ်။ Natalie Portman, Kate Hudson, Keira Knightley နှင့် Cameron Diaz အပါအ၀င်နာမည်ကြီးတွေမှာ စတုဂံပုံသဏ္ဍာန် ခန္ဓာကိုယ်ရှိပါတယ်။ ညာဘက်ပုံမှာ ကင်မရွန် ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ပစောက်ပုံလည်ပင်း အနီရောင်ဝတ်စုံလို ၀တ်ဆင်လို့ရပါတယ်။
ဇွန်းပုံသဏ္ဍာန် ခန္ဓာကိုယ်က Cheryl Burke, Beyoncé နှင့် America Ferrera တို့လို နာမည်ကြီးအတော်များများမှာ ရှိပါတယ်။ ဇွန်းပုံသဏ္ဍန် ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေအတွက် အပေါ်ပိုင်း လက်ဖောင်း၊ အတွန့်အဖက်ပါတဲ့ pencil dresses လေးတွေ ၀တ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ညာဘက်ပုံက ဘီယွန်စေးရဲ့ ပခုံးအတွန့်ပါတဲ့ အနက်ရောင် Pencil ဂါဝန်လေးက ပိုပြီး balance ဖြစ်စေပါတယ်။
စိန်ပုံသဏ္ဍာန် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ခါးနှင့်တင်ပါးတွေထက် ပုခုံးတွေနှင့် ရင်သားတွေ ပိုပြီးရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခါးပတ်ပါတဲ့ ၀တ်စုံနှင့် ပခုံးပျောက် ၊ ဗီပုံစံ လည်ပင်းပါတဲ့ အကျီ င်္တွေက ဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် လိုက်ဖက်ပါတယ်။ Kate Winslet နှင့် Queen Latifah. Kate လိုနာမည်ကျော်မင်းသမီးတွေမှာ ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပုံစံရှိပါတယ်။ ညာဘက်ပုံက ကိတ်ဝင်းစလက် ၀တ်ထားတဲ့ ပုခုံးပျောက် ဂါဝန်လေးလို ရွေးချယ်ပြီး ၀တ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
သငျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျပုံသဏ်ဍာနျအတှကျ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ပှဲတတျဝတျစုံကို ရှာဖှဖေို့ အကွံပွုခကျြ ၈ခု
အမြိုးသမီးတိုငျးက ပှဲအခမျးအနားတှေ တတျဖို့ ကွုံလာတဲ့အခါ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှုအတှကျ ဖှငျ့ထားတဲ့ဗီဒိုရှမှေ့ာ အခြိနျမြားစှာ ကုနျရပါတယျ။ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှု ဖွဈဖို့ဆိုတာ ကိုယျ့ခန်ဓာအခြိုးအစားနှငျ့ ဝတျစုံလိုကျဖကျခွငျးကလညျး အရေးပါပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘယျလိုခန်ဓာကိုယျအမြိုးအစားတှကေ ဘယျလို ဝတျစုံလေးတှေ ဝတျဆငျသငျ့သလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ပနျးသီးပုံ ခန်ဓာကိုယျပုံသဏ်ဍာနျက အပျေါပိုငျးပွညျ့ပွညျ့ ရှိပါတယျ(သငျ့ရဲ့ ရငျဘကျက တငျပါးနဲ့ခါးထကျ ပိုကွီးပါတယျ)။ ဒရူးဘယရီမိုး၊ အိနျဂလြီနာဂြီလီနှငျ့ Tyra Banks အပါအဝငျ နာမညျကွီး တခြို့က ပနျးသီးပုံ ကိုယျခန်ဓာရှိပါတယျ။ ပါတီပှဲတဈခုမှာ လူတိုငျးက သငျ့ကိုရငျသပျရှုမောဖှယျ ဖွဈစခေငျြလြှငျ သငျ့ခါးကိုသေးသှယျစမေယျ့ ဂါဝနျရှညျလေးတှကေို ဆငျမွနျးပါ။
သငျ့ပုခုံးတှဟော သငျ့ခါးလိုငျးနှငျ့တငျပါးထကျ ပိုကယျြလြှငျ သငျ့မှာ တွိဂံပွောငျးပွနျပုံသဏ်ဍာနျ ရှိပါတယျ။ Renee Zellweger၊ Demi Mooreနှငျ့ Naomi Campbell အပါအဝငျ မငျးသမီး၊ မျောဒယျအတျောမြားမြားမှာ ဒီလိုခန်ဓာကိုယျပုံစံရှိပါတယျ။ ဗီပုံစံလညျပငျးပေါကျ၊ ပခုံးပြောကျပုံစံ၊ ပခုံးတဈဖကျပြောကျ ဂါဝနျလိုပုံစံမြိုး ဝတျဆငျနိုငျပါတယျ။
သဲနာရီပုံသဏ်ဍာနျဟာ ခါးသေးပွီး တငျနှငျ့ ရငျအခြိုးအစားကပြွီး အလှဆုံးပုံစံတဈခု ဖွဈတယျလို့ ထငျပါတယျ။ Marilyn Monroe၊ Blake Lively၊ Scarlett Johansson နှငျ့ Dita von Teese တို့လို ကြျောကွားတဲ့ မငျးသမီးတှမှော သဲနာရီပုံကိုယျခန်ဓာရှိပါတယျ။ ဒီခန်ဓာကိုယျပုံစံက ဘယျအရာမဆို ဝတျဆငျနိုငျပါတယျ။
ငှကျပြောသီးပုံသဏ်ဍာနျက တငျနဲ့ရငျပုံသဏ်ဍာနျမရှိခွငျးနှငျ့အတူ အရပျရှညျပွီး ပိနျတဲ့သူတှမှော ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ Jennifer Garner နှငျ့ Anne Hathaway တို့လိုနာမညျကွီးတှမှော ငှကျပြောသီးပုံခန်ဓာကိုယျရှိပါတယျ။ သူတို့သညျ ဘယျဂါဝနျအမြိုးအစားမဆို ဝတျဆငျနိုငျပမေယျ့ A-Line dress၊ Pencil စကတျ/ဂါဝနျ ကဲ့သို့သော ဝတျစုံတှကေိုတော့ ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။
၅။ သဈတျောသီး ပုံသဏ်ဍာနျ
သငျ့တငျပါးတှကေ သငျ့ခါးနှငျ့ ရငျထကျ နညျးနညျးပွညျ့နလြှေငျ သဈတျောသီးပုံသဏ်ဍာနျ ခန်ဓာကိုယျရှိပါတယျ။ Kim Kardashian, Shakira နှငျ့ Jennifer Lopez အပါအဝငျ နာမညျကွီး အမြားစုမှာ ဒီလိုခန်ဓာကိုယျရှိပါတယျ။
ပုံခုံးပျေါမှာ အတှနျ့လေးတှနေဲ့ ဂါဝနျ
A-Lin (သို့) ညာဘကျပုံမှာပွထားတဲ့ tulip စကတျဝတျစုံလို ဝတျစုံမြိုး ဆငျမွနျးပါ။
၆။ ထောငျ့မှနျစတုဂံ ပုံသဏ်ဍာနျ
ဒီခန်ဓာကိုယျပုံသဏ်ဍာနျက ဆှဲဆောငျမှုအရှိဆုံး ခန်ဓာကိုယျပုံစံဖွဈတယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ ပစောကျပုံလညျပငျးပေါကျ၊ အသညျးပုံလညျပငျးပေါကျ၊ ဘေးခှဲ Pencil စကတျ၊ တို့ကို ဝတျဆငျရငျ လိုကျဖကျပါတယျ။ Natalie Portman, Kate Hudson, Keira Knightley နှငျ့ Cameron Diaz အပါအဝငျနာမညျကွီးတှမှော စတုဂံပုံသဏ်ဍာနျ ခန်ဓာကိုယျရှိပါတယျ။ ညာဘကျပုံမှာ ကငျမရှနျ ဝတျဆငျထားတဲ့ ပစောကျပုံလညျပငျး အနီရောငျဝတျစုံလို ဝတျဆငျလို့ရပါတယျ။
ဇှနျးပုံသဏ်ဍာနျ ခန်ဓာကိုယျက Cheryl Burke, Beyoncé နှငျ့ America Ferrera တို့လို နာမညျကွီးအတျောမြားမြားမှာ ရှိပါတယျ။ ဇှနျးပုံသဏ်ဍနျ ကိုယျခန်ဓာကိုယျတှအေတှကျ အပျေါပိုငျး လကျဖောငျး၊ အတှနျ့အဖကျပါတဲ့ pencil dresses လေးတှေ ဝတျဆငျနိုငျပါတယျ။ ညာဘကျပုံက ဘီယှနျစေးရဲ့ ပခုံးအတှနျ့ပါတဲ့ အနကျရောငျ Pencil ဂါဝနျလေးက ပိုပွီး balance ဖွဈစပေါတယျ။
စိနျပုံသဏ်ဍာနျ ခန်ဓာကိုယျဟာ ခါးနှငျ့တငျပါးတှထေကျ ပုခုံးတှနှေငျ့ ရငျသားတှေ ပိုပွီးရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခါးပတျပါတဲ့ ဝတျစုံနှငျ့ ပခုံးပြောကျ ၊ ဗီပုံစံ လညျပငျးပါတဲ့ အကြီ င်ျတှကေ ဒီခန်ဓာကိုယျပုံသဏ်ဍာနျနှငျ့ လိုကျဖကျပါတယျ။ Kate Winslet နှငျ့ Queen Latifah. Kate လိုနာမညျကြျောမငျးသမီးတှမှော ဒီလိုခန်ဓာကိုယျပုံစံရှိပါတယျ။ ညာဘကျပုံက ကိတျဝငျးစလကျ ဝတျထားတဲ့ ပုခုံးပြောကျ ဂါဝနျလေးလို ရှေးခယျြပွီး ဝတျဆငျနိုငျပါတယျ။
Previous articleခြေဖနောင့် အက်ကွဲခြင်းကို ရက်အနည်းငယ်နဲ့ ပျောက်ကင်းစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း
Next articleမြန်ဆန်စွာ လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် သိပ္ပံနည်းကျ နည်းလမ်း (၁၁) ချက်
ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျတှေ မကွာမကွာစီးခွငျးကွောငျ့ အန်တရာယျရှိလာနိုငျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျး (၃) ခု
ပြိုမတေို့ ရှောငျကွဉျဖို့ လိုတဲ့ ဆံပငျစတိုငျ အမှား (၈)ခု